Madaxweynaha Somalia oo kulan la qaatey ciidanka XDS iyo dowlada oo qorsheynaysa in degmada Baraawe la wareegto – idalenews.com
Madaxweynaha Somalia oo kulan la qaatey ciidanka XDS iyo dowlada oo qorsheynaysa in degmada Baraawe la wareegto
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta Villa Soomaaliya kulan kula-qaatay Sarakiisha Ciidamadda Xoogga Dalka Soomaaliyeed. Kulanka waxaa qayb ka ahaa Wasiiraka Gaashaandhigga C/Xakiim Xaaji (Fiqi) iyo Abaanduulaha Ciidamadda Xoogga Dalka Soomaaliyeed General C/Risaaq Khaliif Cilm.
Ugu horeyn Abaanduulaha Ciidamadda Xoogga ayaa warbiixn kooban siiyey Madaweynaha Soomaaliya ka dib ayaa Wasiirka Gaashaandhigga sheegay guulahii ugu dambeyey oo ay Ciidamadda Xoogga Dalka gaareen.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku ammaanay Ciidamadda dadaalada dheeradka ah iyo howlgalladda lagu dabar-goynayo kooxda Al Shabaab” Waxaan aad iyo aad ugu qanacsanahay isbeddelada iyo dardarta Ciidamadda Xoogga iyo waliba sida geesinimada leh ee uu dagaalamyo askariga Soomaaliyeed”ayuu yiri Madaxweynahu.
“ Waxaan hubaa in askariga Soomaaliyeed ee ka adkeysi badan yahay kuwa caalamka kana dulqaad badan yahay dhan walba, marka loo fiiriyo duruufaha ciidankeennu ku jiro, haddana iyadooo sidaa tahay ka xorreynaya dalka Al Shabaab Tusaale ahaan Dhowaan Degmada Mahadaay ayey xorreyeen ciidankeennu waliba iyagoo kooban, ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa kula dardaarmay Saraakiisha iyo Ciidamadda Xooggga dalka inay ilaaliyaan Karaamada Umadda Soomaaliyeed “ haddii aan rabno in aduunka qiimi kulahaano Qarannimaddii Soomaalyeedna si buuxda u soo celino, waxay ku xiran tahay Ciidank, Ciidankuna in uu qiimi lahaadana waxay ku xiran tahay in shacabka la dhowro lagana ilaaliyo kuwa cadowga ku ah”ayuu yiri Madaxweynaha.
“Dowladda waxay go’aan ku gaartay inay muhiimadda Koowaad siiso ciidanka dhanka mushaar bixinta, lacagta Dowladda soo gasho, waxa ugu horeeyo ee laga bixiyanayo waa Mushaarka Ciidanka” ayuu yiri Madaxweynaha.
Ugu dambeyntii Saraakiisha Ciidamadda Xooga Dalka ee kulanka la qaatay Madaxweynaha ayaa ballan qaaday kor u qaadista aqlaaqada Ciidamadda iyo ilaalinta xaqdhowrka shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dhammeystirka howagalladda dalka looga xorreynayo Kooxa Al Shabaab.
Somaliland oo irdaha isugu dhufatey Xarun laga bixin jirey baasaboorka Soomaaliga oo ku taaley Hargeysa
Labo Musharax oo Beelaha Digil & Mirifle ka soo jeeda oo ku tartamaayo Gudoomiyaha Barlamaanka Jubaland